Tsy Manaiky Lembenana - Cloud Library
Accueil - Boky - Tsy Manaiky Lembenana
Diamondra sy vato mahagaga, tsy hay potehina ary manana ny tantarany no ahafantarana ny teny hoe tsy manaiky lembenana raha ny famaritana azy no jerena. Raha ny dikany amin’izao andro moderna izao no ijerena azy, dia enti-manoritra fihetsika olona tsy azo hozongozonina, tsy miovaova fanapahan-kevitra ary vonona izany famaritana izany. Raha toa ka misy fotoana izay tokony tsy hanekentsika lembenana amin’ny fitiavana sy ny fahamarinana dia izao fotoana izao. Andriamanitra dia Fitiavana. Andriamanitra dia Fahamarinana, saingy ny fitiavana sy ny fahamarinana kosa dia tsy voafetran’ny fotoana, ary mandingana ny fironana sy ny fanehoan-kevitra maro. Indraiindray ny hetsika be fitiavana indrindra izay ilaina asehontsika dia ny filazana ny fahamarinana, saingy ny filazana ny fahamarinana dia ilana anao miaina amin’izany aloha.
I Lisa, mpanoratra boky be mpividy indrindra dia mampiasa fomba fampitan-kevitra avy ao amin’ny Soratra Masina ary koa ny tantara; ny antony dia ny hitondrany anao amina dia iray mankany amin’ny Tendrombohitr’Andriamanitra. Ary isika dia tsy hianatra ny hitoetra ao amin’ilay fahamarinana sy fitiavana fotsiny, fa isika ihany koa dia ho lasa olona tsy manaiky lembenana, tsy azo hozongozonina, hentitra amin’ny fanapahan-kevitra ary tsy miovaova. Voaboasan’i Lisa amintsika ao ny hevitry ny antsoina hoe tsy manaiky lembenana; amin’ny fomba feno fandresen-dahatra sy fitiavana be no izarany izany, sady ampifandraisiny amin’ireo tantara goavana ao amin’ny Soratra Masina, miaraka amin’ny tanjon’Andriamanitra ho an’ny fiainan’ny olona. Ho hitanao fa hasehon’Andriamanitra ny drafiny rehefa mitoetra ao Aminy isika. Ao mantsy isika no tefena sy amboarina. Tefena manana ka ny endrik’Ilay tsy manaiky lembenana isika rehefa mitoetra ao amin’i Kristy, Ilay Vatolampintsika.